Ha ezighi ezi ... Not naghị Tweeting ezu | Martech Zone
Afọ ole na ole gara aga, agara m agwa ndị mmadụ ka ha ghara ị tweeting nke ukwuu. N'ezie, ọ bụ isi ihe kpatara ya gịnị kpatara ndị mmadụ jiri soro gị na Twitter. Ngwa ngwa ngwa afọ ole na ole na Twitter esila na chirps ole na ole kwa elekere gaa na mkpọtụ ntị nke autoposts, akaụntụ adịgboroja, ndị spammers, yana ozi na ọsọ nke enweghị ike gbarie na ọkwa ọ bụla dị mma.
Nke bụ́ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ ka a dọọrọ uche gị nọrọ n'ọnụ ụlọ na-ada oké ụda, ị ga-eweli olu gị elu ma ọ bụ na-ekwughachi ihe ị na-ekwu. Twitter bụ nnukwu ụlọ… na-ada oké ụda.
Anọ m na-agụ iwu gbasara Twitter online. Iwu na-aga n'ihu na-ebipụta banyere oge kacha mma iji Tweet na Ting na-agabiga oke. Ekpebiri m ịnwale ndị a iwu. N'ezie, anaghị m eme obere ule, m gbanye Twitter.
Ekwela ka m mehie ihe
Ọ na-amasị m iti mkpu n'ọnụ ụlọ na-ada oké ụda? Mba. Na-amasị m ikwugharị onwe m? Mba… Akpọrọ m ya asị. Ama m na ụfọdụ ndị ga-agwa m na ndụmọdụ m ga-enye ga-atụkwasịrị m nsogbu ma ghara inye aka dozie ya.
Nsogbu a abụghị ndị mmadụ dị ka m. Nsogbu bụ ụlọ. Kwa ụbọchị ruo ọtụtụ afọ, esonyela m na Twitterverse ma gbalịa ịnye uru, ntụrụndụ, enyemaka na mkparịta ụka. Ka oge na-aga, ike gwụrụ m na Twitter. M na-emeghe nri m na obere pasent nke mkparịta ụka ahụ bara uru.
Fọrọ nke nta kwa ụbọchị m na-egbochi spammer. Mgbe m lere anya na peeji ha, ha nwere otu ozi ugboro ugboro ugboro narị. O doro anya, olee otu o siri sie ike Twitter itinye nzacha na akaụntụ iji hụ na ha anaghị emeghachi ozi ha ugboro ugboro?!
Yabụ, rue mgbe Twitter kpebiri ime ihe gbasara ogo na oke ozi kesara na Twitter, ekpebiri m ịkwụsị ya iwu nke ndị ọrụ ibe m na-elekọta mmadụ. Oh… ọ rụkwara ọrụ.
Tweeting Ọ bụla Awa, 24 Awa A Day
Jenn mere ka m mata nnukwu ihe mgbakwunye WordPress akpọrọ Akwalite Old Post. Ezie na e nwere a free version, M ga-ukwuu nwere ike ikwu na-akwụ ụgwọ maka ndị ọzọ na atụmatụ gụnyere ke ịrịba Pro version. Versiondị a nwere ọtụtụ atụmatụ ma na - eme ka ikike ịkwanye ọdịnaya gị dị elu na-egosipụta ihe oyiyi site na WordPress. Ihe mgbakwunye ahụ na-enyekwa ohere Bit.ly mwekota ka ị nwee ike ịlele ọnụego pịa-site na njikọ ejikọtara.
Nke a bụ ihe atụ nke otu Kaadị Twitter gosipụtara
Lelee anyị New Site… na anyị New Resources http://t.co/UWExub2Dy7 #nweke # wordpress pic.twitter.com/MHVgN5zIY6
- Azụ ahia (@martech_zone) June 24, 2015
M debere ngwa mgbakwunye iji biputere ọdịnaya dị n'ime afọ gara aga kwa elekere na Twitter. Mgbe m na-eziga mmelite 2 ruo 4 kwa ụbọchị, ugbu a, m bipụtara 24 ruo 30 ugboro n'ụbọchị. Site na mkpọtụ ahụ, ị ​​ga - eche na m ga - efunahụ ndị niile na - eso ụzọ m wee chụpụ m itinye aka na tank. Nope.
Nsonaazụ nke Tweeting too much
Ndekọ ọnụ ọgụgụ anaghị agha ụgha na nchịkọta Twitter m yana nchịkọta Google saịtị m na-agwa m na nke a bụ ihe ịtụnanya! Nke a bụ nkwụsịtụ:
Ọnụ ọnụego Site na 0.5% ruo ihe karịrị 2.1%!
Tweet Mmetụta Na 159.5% ruo 322,000.
Nleta profaịlụ Na 45.6% ruo 2,080.
-eso ụzọ Ihe ruru 216 ruo 42,600.
Retweets Na 105.0% ruo 900.
Tweets na-ejikọ gị Na 34.3% ruo 6,352.
Okporo ụzọ saịtị si Twitter UP 238.7% na nleta 1,952.
Amaghị m etu m ga - esi jiri ọnụ ọgụgụ ndị a rụọ ụka. Enweghi m ndị na-eso ụzọ, m nwetara ndị na-eso ụzọ. Etufubeghi m aka, ọ ruru okpukpu anọ. Echetaghị m nleta saịtị, ha agbaala okpukpu abụọ. Otu akara metrik ọ bụla na-egosi n'eziokwu na, site na ịba ụba ọnụ ọgụgụ nke tweets bipụtara, emeela m ka mma arụmọrụ m na Twitter.
N'ihi gịnị? O yiri ka ọ doro anya na, ọ bụghị naanị na anaghị m enye ndị na-eso ụzọ m nsogbu ugbu a, a na-ahụkarị tweets m, na-atụgharịkwu ya, ma na-pịa ndị ọzọ. Ọ bụrụ na m ga-atụnyere, ọ ga-abụ na ị na-anya n'okporo ámá na-arụsi ọrụ ike okporo ụzọ na a tweet bụ a billboard. Ohere inweta inweta na bọọdụ iberibe akwụkwọ gị dị ezigbo mma. ma ọ bụrụ n’ịnwere ike itinye bọọdụ ebe ọ bụla ma ọ bụ ihe karịrị otu ahụ, ohere ịga nke ịhụ gị ka mma.
Anọla Ntị M!
Adaberela n'ihe nlereanya m ka ị na-eme mkpọtụ gị na Twitter. Cheta na m na-ekerịta Kaadị Twitter na ọdịnaya nke uru karịa. Agaghị m atụ egwu ịkekọrịta otu Tweet ihe karịrị otu ugboro kwa ụbọchị. Ohere bụ na ndị na-eso ụzọ gị agaghị ahụ ya karịa otu oge. Gbalịa mee ka ọnụọgụ abụọ nke Twitter bipụta ma hụ otu o si emetụta gị nchịkọta. Ọ bụrụ na ọ rụọ ọrụ, gbalịa mee ya ọzọ. Mee ka m mara ka o si aga na nkọwa.
ngosi: My Akwalite Old Post njikọ bụ njikọ njikọta. Ọ masịrị m nke ukwuu nke na m debanyere aha ozugbo maka mmekọrịta mụ na ha.
Tags: akpaakaịtụte akwụkwọ ochieịtụte ochie post proscheduletọ oge wordpress mmadụna-elekọta mmadụ wordpress mwekotaTwitterwordpress na-elekọta mmadụ
Corporate Social Media Successga nke Ọma chọrọ Ngwá Ọrụ SMM
Jul 5, 2015 na 11:45 PM
Twitter na Facebook agbanweela ụzọ ndị mmadụ si ekwurita okwu n’oge a….